‘रामलखन जयसवाल मृत्यु प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न माग’ (भिडिओसहित) « Pariwartan Khabar
‘रामलखन जयसवाल मृत्यु प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न माग’ (भिडिओसहित)
28 September, 2020 10:18 am
काठमाडौं । नेपाल कलवार कल्याण समिति, काठमाडौंले वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएका रामलखन जयसवालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्य, तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग राखेको छ । समितिले जयसवालको के ? कसरी मृत्यु भएको हो ? त्यसमा संसदीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेपनि माग गरेको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले जयसवालको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले जयसवालको परिवारले उचित न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ । सरकारले यो विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । परिवारले अघि सारेका मागहरु चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा मृत्तक जयसवालकी भाई बुहारी पुनम जयसवालले यो प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिन माग गरेकी छिन् । उनले भनिन्,‘गृहमन्त्रीज्यू, चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुहोस, यो जेल र वीर अस्पताल बद्नाम नहोस् ।’ उनले वीर अस्पतालले किन अहिलेसम्म सिसिटिभी फुटेज ननिकालेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्न् । उनले मृत्तक जयसवालको पोष्टमार्टम भैसक्दापनि अहिलेसम्म रिपोर्ट नदिईएको गुनासो पोखिन् ।